पाकिस्तान: इमरान खानले आज अविश्वास प्रस्ताव हार्छन् भने के होला ? « Postpati – News For All
पाकिस्तान: इमरान खानले आज अविश्वास प्रस्ताव हार्छन् भने के होला ?
चैत २०, काठमाडौं । आइतबार अर्थात् पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध विपक्षले ल्याएको विश्वास मतमा मतदान हुँदैछ ।
विपक्षले प्रधानमन्त्री खानमाथि आर्थिक अव्यवस्थाको आरोप लगाएका छन् र जानकारका अनुसार उनका लागि अबको बाटो सहज छैन ।एकातिर विपक्ष उनीविरुद्ध उभिएको छ, अर्कोतर्फ उनको पार्टीभित्र पनि थुप्रै नेता उनको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
यस्तोमा जब पाकिस्तानमा अर्को आम चुनावमा अहिले पनि डेढ वर्ष बाँकी छ । इमरान खान जनतालाई देशको विपक्ष अमेरिकासँग मिलेर कथित रुपमा उनलाई पदबाट हटाउन चाहन्छ र उनी अन्तिमसम्म डटिरहने कुरामा विश्वास दिलाउन प्रयासरत छन् ।
विपक्ष र अमेरिकाको तर्फबाट यो आरोपलाई गलत बताइएको छ ।
यदि इमरान खान विश्वासको मत हार्छन् भने विपक्षको तर्फबाट लण्डनमा बसिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरिफका भाइ शाहबाज शरिफ अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ । यदि शाहबाज शरिफ अर्को पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री बन्छन् भने भारत–पाकिस्तान सम्बन्धको दिशा कस्तो हुनेछ ?
बहुमत आशा छैनः
वरिष्ठ पाकिस्तान पत्रकार नजम सेठी भन्छन्, ‘यदि शाहबाज शरिफ अर्को प्रधानमन्त्री बन्छन् भने भारत–पाकिस्तानको सम्बन्धमा तिक्तता यथावत् रहनेछ ।’
उनी भन्छन्, ‘शाहबाज शरिफले त्यस्तो केही पनि गर्ने छैनन् जसले इमरान खानलाई उनको आलोचना गर्ने मौका मिलोस् । विशेषगरी त्यस्तो समयमा जब पाकिस्तानमा विदेशी हस्तक्षेप ठूलो मुद्दा हो ।’
नजम सेठीका अनुसार अर्को सरकार कम समयका लागि आउनेछ जसको काम अर्को आम निर्वाचन गराउनु हुनेछ । यस्तोमा अर्को सरकारले यस्तो कुनै पनि काम गर्ने छैनन् जसका कारण उनी निकै कम समयमा नै अलोकप्रिय हुनेछन् वा चुनाव हार्नेछन् ।
उनी भन्छन्, ‘अर्को सरकार निकै सतर्क र सावधान हुनेछ र भारत–पाकिस्तान सम्बन्धको स्थिति ज्यूँ का त्यूँ रहनेछ । ’
नवाज र शाहबाजः
पाकिस्तानमा पूर्व भारतीय उच्चायुक्त शरत सभरवाल शाहबाज शरिफसँग थुप्रै पटक भेटिसकेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘शाहबाज शरिफ राम्रो प्रशासक हुन् । टेक्नोक्रेट हुन्, १८–१८ घण्टा काम गर्छन् । प्रोजेक्ट डिलिभर गरिरहेका छन् । उनका दाइ नवाज शरिफ भोट–गेटर हुन् । दुबैको एउटा निकै उत्कृष्ट सम्बन्ध छ । शाहबाज शरिफको कुरा गर्नुपर्दा उनी भारतसँग स्थिर सम्बन्ध चाहन्छन् । उनको धारणा उनका दाइभन्दा फरक छैन ।’
चीनमा एकैदिन थपिए १३ हजार बढी कोरोना संक्रमित
साउदी अरबका राजकुमार काठमाडौंमा